Ny liona sy ny voalavo - Takila Malagasy
Ny liona sy ny voalavo (Tsiky dia ampy)
Mpanoratra: Tsiky dia ampy
Nitsidika : 2638
Hevitra nosintomina tamin'ny anganon'i Jean De Lafontaine
Taloha ela be hono dia ny liona no mpanjakan'ny biby. Natahotra azy avokoa ny biby rehetra. Rehefa mandalo eny an-dalana izy dia miafina ny biby mifanena aminy satria matahotra ny ho harapany. Nahatsiaro ho irery ny liona noho izany ka nisintaka kely niala tany an'ala mihitsy.
Indray andro ary dia nipetraka nakanaka aina teo amoron-tanimbary ny liona. Tsy tandritandriny anefa fa teo akaikin'ny lava-boalavo no nisy azy. Nivoaka ary ity voalavo, tsy nanampo akory hoe eo akaiky eo ilay biby masika, dia taitra mafy ka tsy nahetsika. Izay ny voalavo vao nahita akaiky ny liona tahaka izao. Ny volombavany lava noho ny an'ny saka, ny nifiny mirangaranga na dia mihidy aza ny vavany. Ny volony midoroboka. Nangovitra ny voalavo sady niteny hoe:
- Mifona re tompoko, aza hohanina aho fa kely loatra tsy hahavoky anao akory.
Gaga ny liona no sady nalahelo nahita ity voalavo nihararetra ka nampitony azy nanao hoe.
- Aza matahotra fa tsy hihinana anao izany aho. Marina fa biby manana endrika masiaka aho kanefa tsy hoe haniko daholo izay biby mifanena amiko.
- Ka izany no malaza tenenin'ny biby rehetra, hoy ny voalavo.
- Tsy marina izany, hoy ny liona, mba tsara fanahy koa aho.
Dia nitohy ela be teo ny resak'izy roalahy nandritra ny fotoana ela ka zary mpinamana ery izy ireo.
Nony efa hadiva ho folaka ny andro dia nisaraka izy roalahy. Ny voalavo moa namonjy ny tranony ary ny liona kosa feno fifaliana ka nanapa-kevitra ny hiverina any an'ala amin'izay.
Teny an-dalana niditra ny ala anefa dia tratry ny harato napetraky ny olombelona ny liona. Harato mavesatra izay famandrihana biby goavana. Tsy afa-nihetsika avy hatrany izy fa isaky ny mikofoka kely izy dia vao maika mihidy ilay harato. Hany heriny dia niantso vonjy ka naheno azy ny eran'ny ala manontolo.
Naheno ny fitreron'ny liona ary hono ny amboadia saingy tsy nanatona fa natahotra. "Ndao, ndao!" hoy izy niantso ny zanany sady nentiny nitsoaka lavitra izy ireo.
Naheno ny antson'ny liona ihany koa ny bibilava saingy niverina malaky namonjy ny lavany. "Shhiii, shiii" hoy izy tamin'ny zanany. "Aza misy miteny sao henon'ny liona".
Ny vorondolo koa izay nisidina nanodidina teny, dia naheno saingy nivily lalana. "Hoo, hoo! Hoo, hoo!" Hoy izy tamin'ny zanany. "Ho tratrany isika fa andao malaky"
Dia toa izany, hono, no nataon'ny biby rehetra. Nihatakataka avokoa.
Niantsoantso vonjeo mafy ihany ny liona ka nony farany dia henon'ny voalavo izay nipetraka lavitry ny ala. Poa toa izay dia nivoaka avy tao an-davaka ny voalavo dia nihazakazaka niditra ny ala. Nifanena tamin'ireo biby nitsoaka izy saingy tsy niverin-dalana fa nanohy ihany mandrapahatongany teo amin'ny liona voafatotry ny harato. Nokikisany tamin'ny nifiny ny tady iray tamin'ny harato ka tapaka, ary nivaha avy hatrany ilay harato ka avotra ny liona.
Nisaotsaotra ny voalavo hono ny liona ka nanomboka hatramin'izay dia nihamafy ny finamanan'izy roalahy.
Nahita an'izany hono ny biby hafa vao tonga saina hoe hay tsara fanahy ihany ny liona fa diso hevitra izy ireo taloha. Dia tsy natahotra ny liona intsony hono ny biby rehetra fa nanaja azy tamin'ny maha mpanjakan'ny biby azy.
Koa tandremo ary ny mitsaratsara olona ivelany fotsiny sao diso hevitra.